BMK, Author at Store Feeling - Page4of 6
Posted on November 20, 2020 by BMK
ထမင်းစားချိန် ဆိုင်သွားဖို. ဖြတ်လမ်း ကြား ကနေ အဖြတ် ကိုးတန်း ကလေး မိန်းကလေး ငါးယောက် ကို တယောက် စီ ကောင်လေး လေးငါးယောက် လောက် က တွဲပီး လမ်းလျောက်လာ ကြတာ တာတွေ.လိုက်တယ်…မိန်းကလေး တွေ ခြေလှမ်းက ယိမ်းယိုင်နေပီးတော့ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျောက်နိုင်ကြတော့ဘူး .. မိန်းကေ လးတယောက်ဆို အကျီ ကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ် ……
ထူးဆန်းစွာပေါ်ထွန်းလာသော လိုတရ ဗောဓိရွှေညောင်ပင်(ရုပ်သံ)
ထိုင်းနိုင်ငံ အူဒုံသနိပြည်နယ်တွင် ထူးဆန်းသော ရွှေရောင်အဆင်းနဲ့ ဗောဓိညောင်ပင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက် လာရောက်ဆုတောင်းကြသူများ မေလ ၁၆ ရက်နေ့ကထွက်ခဲ့သော အစိုးရထီများ ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗောဓိရွှေညောင်ကို လာရောက်ဦးခိုက် ဆုတောင်းခဲ့ကြပြီးနောက်တစ်ရက်တွင် ထွက်ခဲ့သောထီနံပါတ် ၉၅ ဖြင့် ရွာသူရွာသားများ ထီပေါက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဗောဓိရွှေညောင်ပင်မှာ ပန်စီရင်စုမှာရှိသော ရွာတစ်ရွာ၏ လယ်ကွင်းကြီးထဲရှိ သက်တမ်း နှစ် ၃၀၀ ရှိပြီဖြစ်သော ညောင်ပင်ကြီး၏ အနောက်နားလေးတွင် ကပ်ပေါက်နေခဲ့ပြီး…
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရှေ့က သနားစရာ လူနာစောင့်များ ဘဝ…
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရှေ့က သနားစရာ လူနာစောင့်များ ဘဝ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီး ရှေ့ လူသွားလမ်းပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ အိပ်စက်နေကြရတဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဆေးရုံတက်လာသူတွေနဲ့ လူနာစောင့်တွေကို နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ညက မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက လာသူတွေဟာ ကိုဗစ်ကာလ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူရမယ့်စည်းကမ်းချက်နဲ့ အဝေးပြေးကားတွေပြေးဆွဲမှု ရပ်နားထားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် နေရပ်ကိုလည်း မပြန်နိုင်၊ ရန်ကုန်မှာလည်း နေထိုင်ဖို့နေရာအခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း ဓာတ်ပုံ-ရွှေအင်းသားခင်မောင်ဝင်း…
မော်လမြိုင်မှ ၁၄ နှစ်သမီးHD ကိစ္စပန်ဆယ်လိုပြောပြီ
မိန်းကလေးဘက်က ဦးဆောင်နေတာမိန်းကလေးက ဆရာကျတာ မိန်းကလေးက ဘယ်လိုဆိုပြီး တစ်တစ်ခွခွတွေပြောနေတဲ့ အထီး၊ အမများအတွက်။အထီးဖတ်ရန်- ဟဲ့… နင်တို့မမြင်လို့သာ ရှိမယ်။နင်တို့အမေတွေနှမတွေလည်း အဲ့အချိန်ဆို အဲ့ပုံပဲ။နှမချင်း၊ အမေချင်းစာနာတတ်ဖို့သာ ဒီလိုပြောလိုက်ရတာ။ နင်တို့အမေတွေ နှမတွတော့ တကယ် အားနာတယ်။ တစ်တစ်ခွခွ Blame ပြီး စောင်ရမ်း အင်နိုးဆန့်ပြနေတဲ့ အယ်မများဖတ်ရန်-အယ်မတို့အလှည့်ကျမှ အဲ့အချိန် တရားမှတ်ပြီး သာဓုခေါ်နေလိုက်ကြ။ဟတ်ပြီလား… HD ဖြန့်တဲ့ လူမဆန်မှုကိုကျော်ပြီး အထက်အောက်…
အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေများစွာရဲ့ အချစ်တွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်သုံးဆယ်ကျော်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းကသူမရဲ့ချစ်သူကို တရားဝင်ချပြထားပေမယ့် အခုအချိန်ထိ အိမ်ထောင်ပြုမယ့်ကိစ္စကို ပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ပရိသတ်တွေကတော့ မအေးသောင်းရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေအပြင် သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း စိတ်ဝင်တစားရှိကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပျိုကြီးပီပီ စကားပြောတတ် ဆိုတတ်လွန်းတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းက ဒီကနေ့မှာလည်း ရည်းစားစကားလာပြောကြတဲ့ ပုရိသအမျိုးသားတွေကို သူ့အလိုလိုနောက်ဆုတ်သွားအောင် ပညာသားပါပါနဲ့ ငြင်းဆိုခဲ့တာကို…
မသန်မစွမ်းဖြစ်နေတဲ့ ဖခင်ကိုအမြဲပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီး ငယ်ဘဝနဲ့ကျောင်းစာကိုလစ်လျူ ရှုခဲ့ရတဲ့ 11နှစ်အရွယ် သမီးလေး
Posted on November 19, 2020 by BMK
ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ ကလေးမလေးရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာဆိုရင် မလေးစားပဲမနေနိုင်တော့လောက်အောင်ပါပဲ ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ အသက် 11 နှစ်အရွယ် Marie Roga. အမည်ရှိတဲ့ကလေးမလေးဟာ အခြားကလေးတွေလို စာပေလေ့လာသင်ယူမှုတွေမှာ အားစိုက်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ရတာမျိုးမရှိဘဲ သူမရဲ့တစ်နေ့တာဟာ မကျန်းမမာဖြစ်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူက ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းအချိန်ကုန်နေခဲ့ရပါတယ် ။ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ကိုယ်လက်မလှုပ်ရှားနိုင် ၊ စကားမပြောဆိုနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီး လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို သူမကသာဖြည့်ဆည်းပေးနေခဲ့ရတာပါ ။ ထို့ကြောင့် သူမဟာကျောင်းပညာရေးမှာ အခြားသူတွေထက်ကို အတော်လေးနောက်ကျနေခဲ့တဲ့အပြင် ဖခင်ကို ဝီးရှဲပေါ်တင်ပြီး…
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ဖေါ်စပ်လိုက်သူကတော့ တူရကီ ဂျာမာန်လူမျိုး Dr. Ugur Sahin ဆိုတဲ့Immunotherapy ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆေးဆရာဝန်တယောက်ပါ။ သူ့ကုမ္ပဏီကBioNTech လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူဟာ ဂျာမဏီမှာနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တဦးပါ။ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးက ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်၊ သူတို့ဟာလူ့ခန္တာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေကို စူပါမင်းလိုဖြစ်အောင်ပြင်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ဆေးကို အောင်မြင်အောင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူကီးမီးယားတို့ ဦးဏှောက်ကင်ဆာ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ကင်ဆာအတော်များများကို အဲ့ဒီ Immunotherapy နည်းနဲ့စပြီး ကုသနေကြပါပြီ။ သူ့ရဲ့…
အိန္ဒိယသဲပန်းပုဆရာမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဲပုံတူရုပ်ထု ပြုလုပ်ပြီး ဂုဏ်ပြု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကမ္ဘာက သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုတစ်ဦးလို့ ဆိုရင် မမှား နိုင်ပါ ဘူးနော်။ခု အခါမှာလည်း အိန္ဒိယပန်းပု ဆရာတစ်ယောက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံကို သဲပန်းပု ထုပြီး ဂုဏ်ပြုလိုက်တာဘဲဖြစ်ပါ တယ်နော်။ ကမ္ဘာသိ အိန္ဒိယသဲ ပန်းပုဆရာ ဆူဒါရှန်ပတ်ဒ်နိတ်က ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏သဲပုံတူရုပ်တု ထု လုပ်ကာ ဂုဏ်ပြု လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ တနလာင်္နေ့က…
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ မြတ်ဘုရား ၏ ဆံတော်ရှင်အစစ်ပါ။ ဖူးမြော်ကြည်ညို ကံထူးကံကောင်း နိုင်ကြပါစေ။ အရွယ်သေးသော်လည်းအရေးကြွယ်သည့်ကျွန်းနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်တို့၌ လင်္ကာဒီပဟုထင်ရှားခဲ့သည့် ဂေါတမဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူပြီး နောက်တွင် ဗုဒ္ဓအယူဝါဒနေလိုလလိုထွန်းပခဲ့သောကျွန်း၊ ယွန်းဆွမ်းအုပ်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကဲ့သို့မြေမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ မဟာဝံသ၊ ဒီပဝံသခေါ် ရှေးမှတ်တမ်းများဖြင့် ကျွန်းနိုင်ငံ၏သမိုင်းများကို ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည်။ သီဟိုဠ်ကျွန်းနှင့်ကျေးကုလားများ၊ ပေါတူဂီနှင့်ဒတ်ချတို့နယ်ချဲ့ပုံ၊ ဗြိတိသျှဓနသဟာယ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အရေးပါပုံတို့ကိုတင်ပြထားသည်။ပြာလဲ့လဲ့ပင်လယ်ရေပြင်ဖြင့် ဝိုင်းရံလျက်ရှိ၍ စိမ်းစိုသာယာလှပသော ရှုခင်းတို့ဖြင့် တင့်တယ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်သော သီဟိုဠ်ကျွန်းသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းလည်းဖြစ်သည်။…
အံ့ဖွယ် သီလတန်ခိုးကြောင့် သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ပေမယ့် ကျန်းမာစွာ သွာလာနိုင် တရားဟောနိုင်တဲ့ ဆရာတော်ကြီး
ပုသိမ်- မုံရွာ လမ်းဘေးကကျောက်ဖူးစံပြကျေးရွာက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာသီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူတဲ့သက်တော် ၁၀၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာတော် ဦးပညာသာရ ဟာယနေ့အချိန်တည်း အကူအညီ မပါပဲ လမ်းလျှောက်နိုင်သလို၊တရားဟော ခြင်းသီလပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်နေသေးတယ်လို့ အံ့သြစွာသိရပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ အသက်တော် ၁၀၂ရှိသည့်တိုင်သီလကောင်းတာကြောင့်သတိလွတ်ခြင်း တုန် ယင်ချိနည့်ခြင်းမဖြစ်ပဲကျန်းမာစွာ အကူမပါပဲ စြင်္ကန်လျှောက်နိုင် တုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ပရိသတ်ကြီးလည်းဖူးမျှော်နိုင်စေဖို့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။(၇) ရက် သားသမီးများ ဖူးမျှော်ကြည်ညိုပြီး ကုသိုလ်သဒ္ဓါပွားများနိုင်ကြပါစေ။ခရက်ဒစ် Zawgyi…